तन्दुरुस्त छन् क्यान्सर जितेका रुपसागर – Health Post Nepal
तन्दुरुस्त छन् क्यान्सर जितेका रुपसागर
२०७७ फागुन १२ गते १०:३२
झापा मेचीनगर नगरपालिका-७ इटाभट्टाका रुपसागर अधिकारी क्यान्सर जितेका युवा हुन्। हेर्दा फुर्तिलो देखिने अधिकारी शिक्षण पेशामा आबद्ध छन्।
मेचीनगर-८ स्थिति एभरेष्ट भ्यू अंग्रेजी माविको कोर्डिनेटर उनी अहिले पनि नियमित विद्यालय जान्छन्। गर्दै आएको काममा खासै परिवर्तन छैन, देखिँदैन।
‘क्यान्सर लाग्नुभन्दा अघि दैनिक ६ क्लास पढाउँथेँ, अहिले त्यसलाई घटाएर विद्यालयको प्रशासनिक काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘गालामा क्यान्सर भएका कारण बोल्न केही घटाएको छु, तर पनि पुरानो जोस र जाँगरमा खासै कमी आएको छैन।’
जतिबेला उनलाई क्यान्सर देखियो, त्यतिबेला मुलुकमा स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मी बढ्दो थियो। क्यान्सर देखिए पनि उनी २०७४ को स्थानीय तहको चुनाव प्रचारप्रसारमा कस्सिएरै लागे।
लोकतान्त्रिक बिचारमा आवद्ध ३९ वर्षीय युवा अधिकारी पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन रणनीति नै बनाएर अघि बढे। उनलाई क्यान्सरले च्याप्दै लग्यो। गाला निरन्तर दुख्न थाल्यो। त्यसबेला बढी बोलेर दुखेको होला भन्ने उनले ठाने।
अधिकारी दुखाइको बेवास्ता गर्दै चुनावमा खटिनै रहे। सामान्य दुखाइ त के हातखुट्टा नै भाँचिए पनि चुनावी अभियान उनको पहिलो प्राथमिकता थियो त्यसबेला।
अधिकारीले त्यो समयको स्मरण गर्दै भने,‘जतिजति चुनाव नजिकिँदै थियो त्यति नै मेरो देब्रेपट्टीको गालाको दुखाइ पनि बढिरह्यो, दुखाइ कम गर्न दैनिक ३ वटासम्म पेन किलर खाएर चुनावी प्रचारमा हिँडिरहेँ।’
चुनावी नतिजा आइसक्दासम्म अधिकारीको गालाको दुखाइ खपिनसक्नु भइसकेको थियो। सुरुमा उनलाई र परिवारलाई के रोग लागेको हो थाहै भएन। जिब्रोमा मासु पलाएको जस्तो महसुस भयो। एक्कसी क्यान्सर त भएको होइन भन्ने भयले उनको मन चिसो बनायो, केही समयपछि नै उनको देब्रे गाला अस्वभाविक सुनिँयो।
परिवारले गाला सुन्निएको देख्यो, सोधिखोजी सुरु भयो। तर उनले सुपारी हालेको छु भन्दै परिवारलाई टारे। अधिकारीले भने , ‘गाला सुनिएको देखेपछि आमाले सोध्नु भयो? तेरो गाला के भएर सुन्निएको हो? अधिकारीले त्यसबेला आफूले बोलेको स्मरण गरे, केही भएको छैन, सुपारी हालेको छु भन्दै टारिदिएँ।’
जब उनको गालाबाट रगत बग्न थाल्यो त्यस बेला परिवारले तत्कालै उपचार गराउन दबाब दियो। त्यो बेला अधिकारीले आफूलाई क्यान्सर नै भएको हो भन्ने लागेको र अब बाँच्दिन किन उपचार गराउनु भन्ने सोचाइ मनमा आएको स्मरण गरे। उनले भने ,‘क्यान्सरको उपचार नै हुँदैन अब पक्कै मरिन्छ भन्ने लाग्यो।’
परिवारको दबाबपछि उनले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उनले परीक्षण गराए। चिकित्सकले क्यान्सर भएको बताए। ‘क्यान्सर नै भएको डाक्टरले बताउँदा मर्छु भन्ने लागेको थियो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘मलाई बाहिर राखियो, मेरो साथी जानू भएका मामालाई भित्र बोलाएर डाक्टरले तपाईंको भान्जालाई क्यान्सर छ भनेछन्।’
चिकित्सकले तत्काल अपरेसन गर्नुपर्छ भने पनि अधिकारी परिवारले धरानमा अप्रेसन गर्न नै मानेन। परिवारले भारतमा अपरेसन गर्ने अडान लियो। २०७४ साउनको तेस्रो साता अधिकारी उपचारका लागि दिल्ली गए।
राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा पुगे। त्यहाँका डाक्टरले गरेको व्यवहार र दिएको हौसलाले आफूमा बाँच्ने झिनो आश पलाएको अधिकारीले सुनाए।
चिकित्सकले केमो दिनु पर्ने र अस्पतालको शाखा काठमाडौंमा नै भएको र त्यही पुगेर केमो दिन सकिने बताएपछि अधिकारी काठमाडौं
फर्किए। हरिसिद्धि पुगेर केमो चढाउन सुरु गरे। काठमाडौंमा पनि डाक्टरले दिल्लीको जस्तै उर्जा थपे। अधिकारीमा बाँचिने आश थप बलियो बन्यो। ‘डाक्टरको विनम्र सल्लाहले बाँच्ने आश जाग्यो, जब केमो दिन सुरु गरियो त्यसपछि त मर्दिन भन्ने पूर्ण विश्वास नै भयो,’ उनले सुनाए।
तीन महिना केमो दिएको र सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा हड्डीमा क्यान्सर नपुगेको देखियो। उनी भाग्यमानी सावित भए। क्यान्सर पुरै निको हुने अवस्थामा नै रहेको चिकित्सकले बताएपछि आफ्नो नयाँ जीवन सुरु भएको अधिकारीको भनाइ छ।
अधिकारीले भने, ‘अपरेसन गर्दा अघिको म र अपरेसन पछिको म फरक मान्छे हो जस्तै लाग्यो।’ केमोथेरापीको तीन महिनाअत्यन्त पीडादायक भएको उनले स्मरण गरे। ‘केमो दिइरहेको समय अत्यन्त पिडादायक थियो, शरीर दुब्लो हुँदै गयो, खान रुची नै भएन , अनेक थरीका समस्या आइरह्यो, डाक्टर र परिवारकै हौसलाले मलाई बचायो,’ उनले विगत सुनाए।
अधिकारी केमोथेरापी सकिएको एक वर्ष समाजसँग टाढा भएर घरमै बसे। एक वर्षपछि दिल्लीमा फेरि उनको अपरेसन भयो। क्यान्सर निको भएको रिपोर्ट आयो, अहिले उनको जीवन सामान्य नै छ।
उनी नियमित चेकजाँचका लागि ६/६ महिनामा दिल्ली पुग्छन्। रुपसागर आज पनि आफ्नो काममा उत्तिकै सक्रिय छन्। हिजो र आजको दैनिकीमा भने थोरै परिवर्तन अवस्य भएको छ।
‘पहिला कसैले बोलाउने बित्तिकै जहाँ जान पनि जान तयार हुन्थेँ तर अहिले आफ्नो लागि खानेकुराको व्यवस्थापन गरेर मात्रै हिड्छु,’ अधिकारी भन्छन्,‘खाने कुरामा विषेश ध्यान दिने गरेको छु, बाहिर बनाएको खानेकुरा खान्न,सबै सामाग्री घरबाटै बोकेर हिँड्छु।’
सुरुवाती अवस्थाको क्यान्सर निको हुने उनको अनुभव छ। क्यान्सर लाग्ने बित्तिकै मान्छे मरिहाल्छ भन्नू नै गलत भएको अधिकारी बताउँछन्। खानपानमा विषेश ध्यान दिने र परिवारको बलियो साथ भए क्यान्सरलाई जित्न सकिने अधिकारीको अनुभ छ। बताउने उनले क्यान्सरलाई सामान्य रुपमा लिनु नहुने बताए।
क्यान्सर पछिको जीवन आफ्ना लागि नयाँ भएको बताउने रुपसागर रिस, लोभ, लालच सबै हराएको बताउँछन्। ‘जीवनलाई नजिकबाट बुझ्न पाएँ,’ अधिकारीले भने, ‘नयाँ जीवनलाई परोपकारी काम र आफ्नो परिवारका लागि खर्च गर्छु।’
ट्रमा सेन्टरको निमित्त मेसुमा डा प्रमोद यादव
कुपोषणबाट ८० लाख बालबालिका मृत्युको मुखमा : युनिसेफ
५ देखि १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काेराेनाविरुद्धकाे खोप लगाइँदै
पोखराको नीति तथा कार्यक्रमः ४ वर्षभित्र सुविधासम्पन्न मेट्रो अस्पताल निर्माण गरिने [स्वास्थ्यका १६ बुँदासहित]